I-china i-BRC yentsimbi ebiyelweyo yocingo olubiyele umenzi kunye nomthengisi | | Pro kocingo
Ucingo lwe-BRC lwenziwe ngokugoba ubume boonxantathu phezulu nasezantsi ngesiseko socingo oluqhelekileyo lwecingo. Ucingo lwentsimbi olusebenzisa ubukhulu becala lwentsimbi oludityaniswe kunye ukuxhathisa izothuso zangaphandle. Isakhiwo ngaphezulu nasezantsi senza ukuba kubonakale kulungile ukutsala umdla. Uxinzelelo oluphezulu lwentsimbi yentsimbi kulwakhiwo oluchanekileyo lubonelela ngenkqubo yokubiyela ngokhuseleko kwizakhiwo. UKUFUMANEKA KWEZIBONELELO BRC ucingo oluthambileyo locingo olucociweyo ngobukhulu obahlukeneyo kunye nemibala. Kwakhona 2 unyango komhlaba ezahlukeneyo kwalenza kunye umgubo wawutyabeka. Sithenga ibakala lekhabhoni yentsimbi yentsimbi kunye negama elidumileyo lomgubo weAzzon Nobel, kwaye sisebenzisa izixhobo eziphambili ukuqhubekeka.
I-BRC yocingo lokucoca ulwelo lusetyenziswa ikakhulu njengocingo lokuhombisa iigadi, iipaki, kunye nezoo, okanye njengocingo lokhuseleko kwiindawo zokupaka, kwizikhululo zeenqwelo moya, kumadama okudada, ekuhlaleni njalo njalo. Kukhetho olufanelekileyo ukuba ufuna ucingo olomeleleyo nolukhangeleka kakuhle.
Ucingo lweDia.: 3.0-6.0mm
Enemingxuma: 50 × 150mm / 75 × 150mm / 50 × 100mm
Ubungakanani bePaneli: H1200 / 1500/1800 / 2000mm × W2000mm / 2500mm
Iposti: Iposti ejikelezayo, iposti yesikwere
Isiseko: Ibloko lekhonkrithi, imfumba yomhlaba
NeZilinganisi: SUS304 / kwalenza
Kugqityiwe: Hot-nkxu kwalenza / Powder wawutyabeka (Brown, Mnyama, Luhlaza, Mhlophe, Ngwevu)
1) Iphaneli enemingxuma kwalenza okokuqala kwaye ke ukutshiza electrostatic phezu komhlaba. Ke ucingo lwe-BRC lunokuxhathisa ukubola.
2) Umphezulu woluhlu awuniki milo ibukhali okanye inzima ukuthintela ukonakala kwencam yocingo ebantwini.
I-3) Uyilo olukhethekileyo ngaphezulu nasezantsi lwenza lubonakale lunomtsalane kwaye lufanele ukuhombisa igadi yakho. Ikwanokubonakala okuhle ukubonisa abantu igadi yakho ngaphandle.
4) Ulwakhiwo olulula aludingi kuchitha ixesha elininzi kufakelo kunye nolondolozo.
Into NO.: PRO-11 Ixesha Lead: 15-21 DAYS Imveliso Orgin: CHINA
Egqithileyo Chain Link Kucingo olubiyele Kuba isicelo yorhwebo kunye yokuhlala
Okulandelayo: Iphaneli yocingo lwesinyithi esenziwe ngesicelo sokwakha